चट्याङ लागेर एकको मृत्यु !! – Nepal
चट्याङ लागेर एकको मृत्यु !!
अप्रील 4, 2018 अप्रील 12, 2018 admin	Comment(0)
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ घैराङमा चट्याङ लागेर बुधबार बिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्युहुनेमा घैराङका ४० वर्षीय श्यामबहादुर विक रहेका छन् । घरमा सुतिरहेका वेला मंगलबार राती चट्याङ पर्दा गम्भीर घाइते भएपछि उपचारका क्रममा गजुरीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
चट्याङबाट घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ ।
सांसदले ४ करोडमा ५ वटा आयोजना छान्न पाउने
मे 30, 2018 admin
सांसदहरुलाई सिधै पैसा दिने प्रस्तावको विरोध भएपछि सरकारले उनीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छान्न पाउने अधिकार दिएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड सम्म खर्च हुने गरी ५ वटा आयोजना छान्न पाउने उल्लेख छ। बजेट भाषण सकिएपछि संसदबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुरुपयोग नहुने […]
घुस लिँदै गर्दा विद्युत् इन्जिनियर चौधरी पक्राउ !!